Indlu yeFama yaseIreland eqhelekileyo-kwifama yeehektare ezingama-20 - I-Airbnb
Indlu yeFama yaseIreland eqhelekileyo-kwifama yeehektare ezingama-20
Indlu yaseFama yesiNtu yase-Irish-esanda kulungiswa eVirginia, Co. Cavan.
Indawo yokuhlala ibandakanya iindwendwe ezi-6, ezibandakanya iGumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi, amagumbi okulala ama-2 (iibhedi ezi-4), igumbi lokuhlambela/Ishawari, igumbi loncedo. Ibafaneleke ngokufanelekileyo abo banqwenela ukuba noxolo kunye nokuzola kwindawo esemaphandleni ngelixa ikwafumaneka ngokulula kwimisebenzi eyahlukeneyo kunye nezinto eziluncedo. Ibekwe kumgama wokuhamba weLough Ramor, kwaye ilungele ukujonga 'iMpuma yaMandulo yaseIreland kukho into yakhe wonke umntu okwindawo ekufutshane.
Indlu inikwe ngokupheleleyo zonke izinto eziluncedo ukubandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ligcwele iwasha kunye nesomisi. Indlu isemanzini esixeko kwaye ine-150 M yesantya esiphezulu se-fiber optic internet ukuya endlwini ukuze uhlale uqhagamshelwe eofisini ngalo lonke ixesha. Kukwakho nefowuni yasekhaya onokuthi unike inombolo kubantu basekhaya kwaye banokukufowunela apho endlwini nanini na.
60" HDTV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Le ndlu ikwifama kumgama nje oziikhilomitha ezimbalwa ukusuka e-Ryefield pub kunye nevenkile elula. Idolophu yaseVirginia ikwimizuzu nje esi-7 ukusuka apho unokufumana khona ivenkile kunye nokutya. Kwakhona umgca webhasi waseIreland unokuqhagamshelwa eVirginia.
Ummeli womkhosi u-Irene wakhulela kule ndlu kwaye uyazi kakuhle indawo kunye neziza. Sinokukuseta kunye nenkampani yezokhenketho yasekhaya enokubonelela ngokhenketho lwabucala. Kwakhona sinokucebisa isikhokelo esikhulu kuzo zonke iintlobo zokuloba kwindawo. ICavan County iyaziwa ngokuba namachibi angama-365 abekwe ngaphaya kwayo ngoko kukho ukuloba okukhulu macala onke kuwe.
Ummeli womkhosi u-Irene wakhulela kule ndlu kwaye uyazi kakuhle indawo kunye neziza. Sinokukuseta kunye nenkampani yezokhenketho yasekhaya enokubonelela ngokhenketho lwabucala. Kwa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Virginia